Siem Reap cambodia - ọnọdụ, hotels, ihu igwe, ọdụ ụgbọ elu, ihe ị ga-eme
Ọnwa ọmụmụ nke June
Ọnwa ọmụmụ nke ọnwa Nọvemba
Siem Reap bụ isi obodo Siem Reap Province na northwest Cambodia. Ọ bụ obodo ntụrụndụ a ma ama na ọnụ ụzọ ámá mpaghara Angkor.
Siem Reap taa ịbụ ebe ndị njem amara ama ama nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ resoụ resoụ, ebe ntụrụndụ, ụlọ oriri na ọ businessesụ ,ụ na azụmaahịa ndị metụtara ya na njem. Ego a dị ukwuu na ịdịnyere ya na ụlọukwu ndị Angkor, ebe ndị njem na-adọrọ mmasị na Cambodia kacha ewu ewu.
Ebee ka Siem Nweta?
Siem Reap, nke gọọmenti Siemreap bụ obodo nke Cambodia, nke dị na northwest Cambodia. Ọ dị n'ókè-ala nile nke Oddar Meanchey n’ebe ugwu, na Preah Vihear na Kampong Thom n’ebe ọwụwa anyanwụ, Battambang na ndịda, na Banteay Meanchey n’ebe ọdịda anyanwụ. Isi obodo ya na obodo kachasị ukwuu bụ Siem Reap. Ọ bụ isi obodo nlegharị anya na Cambodia, ebe ọ bụ obodo kacha dịrị nso na ụlọ nsọ a ma ama nke Angkor
Kedu ihe kpatara ịga Siem Reap?
Maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ndụ na omenaala. Mana isi ihe kpatara ị ga-eji bịakwute Siem Reap bụ ịga leta ụlọ arụsị mara mma nke Angkor Wat, ihe ncheta okpukpe kachasị ukwuu n'ụwa, na saịtị ahụ na-erughi hectare 162.6. Ezubere ya dị ka ụlọ nsọ Hindu raara nye chi Vishnu maka alaeze Khmer, ejiri nwayọ gbanwee ya ịbụ ụlọ nsọ Buddhist na njedebe na narị afọ nke 12.
Siem Reap ọ dị nchebe?
Siem Reap bụ ebe kachasị dị nchebe na Cambodia. Ọ ghọrọ ebe a na-eme njem nleta na ebe a na-eme njem nleta. Ọ bụ ezie na obere mpụ abụghị ihe ọhụrụ, ọ bụrụ na mmadụ nwere ihe ọ bụla gbasara ha, otu onye ga-adị nchebe.
Ogologo oge ole ka ị ga-anọ na Siem Reap?
Enweghi ike ikpuchi Siem Reap n'otu ubochi. Ga-achọ ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ iji kpuchie mbara sara mbara nke ụlọ nsọ Angkor na ebe nkiri ndị ọzọ dị na mpaghara ahụ.
Kedu mgbe ị ga-eleta Siem Reap?
Ndị njem ga-enwe obi ụtọ ga-agwa gị na ọ nweghị oge dị njọ iji gaa Siem Reap. Kedu nke bụ eziokwu, ma ọ bụrụhaala na ị na-agbanwegharị etu esi etinye oge gị ozugbo ị rutere ebe a.
Oge ọkọchị na-amalite na Disemba ruo Eprel, ebe udu mmiri site na May ruo November na-eweta ihu igwe mmiri na iru mmiri dị elu.
Oge kachasị mma iji gaa Siem Reap bụ na Disemba na Jenụwarị, mgbe ụbọchị na-acha anwụ na-acha. Naanị mara na nke a bụ oge njem nleta kachasị elu, yabụ ị ga-ahụ ya jupụtara ebe niile na ọnụahịa ga-adị elu.
Kedu ụdị aka osimiri ahụ site na Siem Reap?
Siem Reap enweghị ụsọ mmiri. A na-eleghara osimiri osimiri Cambodia anya na-amasị ndị Thailand. Ma nwayọ nwayọ, n'ezie, agwaetiti na -amaghị ama nke obodo na aja ọcha na-acha ọcha nke Sihanoukville bụ ndị ndị hụrụ osimiri n'akụkụ ụwa mara.
Ebe dị anya site na Siem Reap ruo Sihanoukville dị gburugburu 532km (350 kilomita) site n'okporo ụzọ. Ọ bụ n'ihi mbufe a dị anya (awa nke 10-15 n'okporo ụzọ) na ọtụtụ ndị njem họọrọ ịgaghị Sihanoukville ma ọlị. Nhọrọ kacha ososiri iburu ugbo elu, nke na-ewe awa 1.
N’agbata ebe abụọ a ma ama dị na Cambodia, Siem Reap dị ka ebe kachasị mma ịla ezumike nká. Ọ bụ ezie na Phnom Penh na-anọchite mgbanwe, Siem Reap na-ejide ihe dị mkpa iji chekwaa ya. Siem Reap nwere ike ịpụta dị ka obodo na-azụ azụ ma e jiri ya tụnyere Phnom Penh n'ihe gbasara ohere azụmahịa.
Siem ga-aghọrọ mkpụrụ nke phnom: 143 kilomita (231 km)
Mgbe ị na-eme njem site na Phnom Penh gaa Siem ị nwere nhọrọ 4 dị iche iche:
I nwere ike iburu bọs - awa isii
Wepụta a bit ọzọ na na tagzi - 6 awa
Tinye ụgbọ elu - nkeji 50
Were ụgbọ nke gafere Tonle Sap Lake- 4 ruo awa 6
Siem Reap na Thailand
Ebe njem Bangkok dị ihe dị ka 400 km.
N'agbata obodo ndị a na-arụ ụfọdụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala a tụkwasịrị obi, ị ga - eburu:
Agbọ ala na-aga site na Siem Reap gaa Bangkok. (6 ruo 8 awa)
AKW aKWỌ ụgbọ elu - 1 awa
Siem Tinye na Vietnam
Ebe dị anya site na Saigon ruo Siem Reap dị ihe dịka 600 km site na ala.
Site na Ho Chi Minh ị nwere ike ịga njem:
Na bọs (awa 12 - 20, dabere na nkwụsị na Phnom Penh)
Inwere ike idetu ụgbọ elu na-aga (Oge 1)
Siem Reach Hotels
E nwere ọtụtụ narị ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na Siem Reap. Omenala ma ọ bụ nke oge a, maka obere ma ọ bụ ego a na-akparaghị ókè, site n'ụlọ ndị ọbịa ruo na nkwari akụ kpakpando 5, onye ọ bụla ga-enweta obi ụtọ.
Ọdụ ụgbọ elu Siem Reap
Siem ị nweta akara koodu ọdụ ụgbọ elu: Ada aba
si ọdụ ụgbọ elu ruo Angkor Wat: Nkeji 17 (5.8 km) site na Ọdụ ụgbọ elu
site na ọdụ ụgbọ elu na obodo center: 20 - 25 nkeji (10 km)
Mgbe ị na-eme njem anya nke 9km site na Ọdụ ụgbọ elu Siem Reap gaa na etiti obodo, ị nwere nhọrọ 3:
Tagbọ na-agba ọgba tum tum
siem ubi elu ugbo elu
USD: dollar US (US) ($)
AED: Dirham United Arab Emirates (د.إ)
CNY: yuan ndị China (¥)
CRC: kọlụkọ Costa Rican (₡)
AKWỤKWỌ: Cape Verde escudo ($)
Ọnụego mgbanwe: Czech koruna (Kč)
KGS: Kyrgyzstani som (dị)
LAK: Lao kip (A)
ỤWA: Dirham Moroccan (د.م.)
PLN: złoty Polish (zł)